Kenya oo damacsan in ay kasoo kireeysto 500 oo dhakhaatiir ah dalka dariska ah ee Tanzania - Horn Future
NAIROBI-Dalka Kenya ayaa qorsheeynaya in uu kasoo kireeysto 500 oo dhakhaatiir ah dalka dariska ay yihiin ee Tanzania ka dib shaqo- joojintii dhakhaatiirta Kenya ee 3 bilood jirsatay taas oo dhamaatay horaantii toddobaadkan,sida ay ku dhawaaqeen saraakiisha dalkaasi.
Madaxwaynaha Tanzania John Magufuli oo uu marti u ahaa wasiirka caafimaadka ee Kenya Cleopa Mailu ayaa sheegay inay hayaan dhakhaatiir Tanzanian ah oo imika ahaan aanan shaqeeynin, sidaas darteed waxaan go’aansaday 500 dhakhaatiir ah in aan u dirno Kenya si ay u buuxiyaan farqiga jira ee dhakhtarada iyo saameynta ay ku yeelatay Kenya shaqo joojintii 100ka maalmood.
Madaxwayne Magufuli ayaa intaa ku daray in Kenya ay ku heeshiiyeen inay bixiyaan mushaharka dhakhaatiirtan,sidoo kale ay siiyaan hoy iyo ammaanka ku filan, laakiinse wax faahfaahin ah oo dheeraad ah ma bixin .
Sababaha shaqo- joojintan Kenya ayaa waxa kamid ahaa gabaabsiga dhakhaatiirta ee goobaha caafimaadka dadweynaha ee dalka, marka lagu daro mushaharka.
Arrinta ku saabsan dhakhaatiirtan Kenya ay soo kiraysaneeyso ayaa waxay imanaysa maalmo uun kadib heshiiskii ay kala sexeexdeen dhakhaatiirta Kenya ee shaqo-joojinta ku jiray iyo xukuumadda Kenya,taasoo oo so gabogabeeysay 3 bilood oo ismari-waa ba’ani u dhexeeyay .
Heshiiskan ayaa waxa kala saxeexday wasiirka caafimaadka Kenya Cleopa Mailu iyo saraakiil katirsan Xirfadleeyda Caafimaadka Kenya, Farmasiiyada, iyo Midowga daweeynta Ilkaha ee (KMPDU) kaas oo ka qabsoomay aqalka( Delta House) ee xarunta dalka Kenya ee Nairobi.
« Duufaanta Meeraha ee boodhka oo curyaamisay gabi ahaan dugsiyada waxbarasho ee Sucuudiga	» Somalia receives almost $1 billion worth of Turkish aid